DAAHA GADAASHIISA: Arrin la yaab leh oo kasoo if baxday rigoorihii Milan laga diidey ciyaartii Juve-Milan! | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha DAAHA GADAASHIISA: Arrin la yaab leh oo kasoo if baxday rigoorihii Milan...
DAAHA GADAASHIISA: Arrin la yaab leh oo kasoo if baxday rigoorihii Milan laga diidey ciyaartii Juve-Milan!
(Milano) 13 Abriil 2019 – Waxaa soo kordhaya xogo dheeraad ah oo ka imanaya daaha gadaashiisa oo ku saabsan sida loo dhex dhexaadiyay ciyaartii muran dhaliska ahayd ee Juve-Milan.
Sida ku dhigan Il Giornale rigoorihii Milan laga diidey kaddib markii uu kubadda si cad u gacmeeyay Alex Sandro wuxuu ahaa go’aan sii degsan oo dhanka garsooraha ahaa.
Sida uu qorayo warsiduhu, kaddib markii uu daawaday muuqaalka celiska ah ee VAR, Fabbri – oo horayba uga gunuunucay in loo yeerey si uu u arko khaladka – ayaa ku adkaystay inaysan rigoore ahayn.
Markii ay halkaa joogto, garsoore Calvarese oo VAR fadhiyay, oo la yaabban hab-dhaqanka saaxiibkii oo rigoore cad oo uu u jeedo diidey, wuxuuna ku yiri: “sidaad doonto u go’aami, haddii aadan doonayn in lagu caawiyo …”.
Previous articlePresident Trump targets Rep. Ilhan Omar with a video of Twin Towers burning
Next articleAC MILAN VS SS LAZIO: Shaxda & safafka ay caawa kusoo geli karaan!